Jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar oo dhaawacmay - Aayaha
Jilaaga caanka ah ee jila filimada dalka Hindiya, Rajiv Hari Om Bhatia, oo ay Soomaalida u taqaano Akshay Kumar ama Mastar Boon ayaa dhaawacmay xilli uu ku guda jira duubista filimka Sooryavanshi oo dhawaan la filayo in uu soo baxo.
Warbaahinta ugu afka dheer dalka Hindiya ayaa kusoo warrantay in jilaaga uu ka murgacday gacanta bidix, gaar ahaan suxulka.
Filimka Sooryavanshi oo qeyb ahaan yahay dagaal la is eryanayo ayaa markii uu Akshay dhaawacmay waxaa markiiba xaaladiisa la tacaalay dhakhaatiir qaabilsan lafaha.
Dhakhaatiirtan ayaa la sheegay in ay la socdeen kooxda filimka duubeysa, oo ay yihiin kuwa loogu talo galay in ay la tacaalaan xaalad walba oo ku timaada jilayaasha ku hawlan duubista filimka, kuwaas oo qaabilsanaa lafaha.
Walow daqiiqado uu hakad ku yimid duubista filimka ayaa hadana dhakhatiirta waxaa ay ku guuleysteen in markiiba ay daaweyaan jilaaga, si uusan hakad ugu imanin duubsita filimka.
Waxaa ay ku rakibeen qalab ka caawiyay in uu shaqadiisa sii wato, si aanay qalqal ugu imanin hawsha duubista Filimka.
Arrintan ayaa soo shaac baxday, kadib markii jilaaga uu bartiisa Instagram soo dhigay muuqaal isagoo gacan duuban, muuqaalkaas oo ay ku wehlisay atirishada caanka ah ee Katrina Kaif oo iyaduna qeyb ka ah filimka Sooryavanshi.
Duubista filimkan ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah jilayaal uu ka mid yahay Ajay Devgn.
Wargeyska The Mumbai Mirror ee ka soo baxa dalka Hindiya ayaa kusoo warramay in walaaca ugu weyn ee uu qaabay soo saaraha filimka uu ahaa in uu hakad ku yimaado duubista filimka, balse uu kusoo dhamaaday sidii la qorsheeyay.
Inkastoo gosgooska ama horudhaca filimka la soo saaray ayaa hadana waxa la filaya in la soo bandhigo bisha Maarso ee sanadka 2020 isagoo dhameystiran.
Filimkan oo ay ku baxeyso malaayiin doolar ayaa waxaa soo saaray oo agaasimay filim soo saarayaasha caanka ah ee Rohit Shetty iyo Karan Johar, waana filim qeyb ahaan ku saleysan dagaal la jilayo waxana filimkan lagu jilay magaalooyinka Mumbai, Bangkok iyo Hyderabad.
Wargeyska ayaa sheegay in dhawaca soo garay atooraha uu ka dhashay qeyb ka mid ah jiliinka filimka oo la isku eryanayo mooto iyo diyaaradaha sida qumaatiga u kaca ee Helikobtarada.
Akshay Kumar oo Soomaalidu ay u taqaano Mastar Boon ayaa ah jilaa caan ka ah dalka Hindiya iyo guud ahaan caalamka, waxana inta badan uu soo dhigaa aflaan ku saleysan dagaal iyo jaceyl.
Dhacdo Naxdin Leh: Nin dhalinyaro ah oo dilay adeerkiis oo meher xaday hooyadiis